Waliigaltee mootummaafi Adda Bilisummaa Oromootti wanti gufuu ta'e maali? - BBC News Afaan Oromoo
Fulbaana darbe waamicha mootummaan taasiseef simate karaa nagaa qabsaa'uuf gara biyyaa kan gale Adda Bilisummaa Oromoofi dhaaba biyya bulchaa jiru gidduu wal gaarreffannaan jiru yeroo gara yerootti dabalaa jira.
Qaamotni lamaan magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraatti waliigaluu isaanii himanillee loltooti mootummaafi waraanni ABO hanga walitti dhukaasuu gahanii jiru.
''Gama mootummaan of kennuufi haamileen duraan ture sun hir'ateera jedhu,'' miseensa Shanee Gumii ABO kan tahan Obbo Mikaa'el Booran.
"Hiidhannoo hiikkachuun dhimma mariif dhiyaatu miti"
Loltoonni ABO Eertiraadhaa gara biyya galan keessaa 700 kan ta'an gara poolisii Oromiyaatti makamuuf leenjiirra akka jiran yeroo adda addaa himamaa ture.
Kan hafanis akkaataa fedha isaaniitti ramaddiin akka kennamuuf koreen dhaabbatee hojjetamaa akka jiru, aanga'oonni gama lamaanii himaa turanis hanga yoonaatti hojiin wanti mul'ate hin jiru.
Maaltu danqaa ta'e?
Waraana biyya keessa jiru ilaalchisee "mootummaa waliin biyyuma gallee koree dhaabnee furmaata kennina jennee walii galle," kan jedhan Obbo Mikaa'el, harkifannaan gama mootummaan jiru rakkoon tokko tokko akka dhalatu sababa ta'eera jedhu.
"Mootummaan akka ofii fedhe gochuu barbaada" jedhu.
Isaan kana haa jedhan malee qondaala ODP kan ta'an Obbo Addisuu Araggaa, mootummaan qophii barbaachisu xumuree eegaa jira jedhu.
"Waraana maqaa ABOtin hidhatee Oromiyaa bakka addaa addaa keessatti socho'aa jiru akkaataa waliigaltee taasifameetiin mootummaan simatee, leenjisee bobbaasuuf qophii hunda xumuree obsaan eegaa jira," jechuun fuula 'Facebook' isaanii irratti barreessanii jiru.
Waliigalteen mootummaa fi jaarmiyaalee siyaasaa gidduutti taasifame qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudha kan jedhan Obbo Addisuun, gama mootummaatiin wanti jijjiirame hin jiru jedhu.
"Jaarmiyaaleen siyaasaa hundi ejjennoon qabsoo karaa nagaa kun sirriidha jedhanii qabsoo Oromoo wayita utubaa jiranitti, jaarmiyaa tokko qofarratti wanti addaa uumame maali?" jechuun gaafatu.
"Dubbiin kun lafarra harkifannaan hawwii ol'aanaa dubbii kana karaa nagaan xumuruuf qabnurraa ka'uun jaarsummaan osoo hin hafin waan godhamuu qabu hunda godhaa jirra" jedhu Obbo Addisuun.
Jaarmiyaaleen siyaasaa biyya alaatii galan waajjira akka banatan, tarsiimoo fi sagantaa siyaasaa isaanii bilisa ta'anii akka beeksifatan haalli mijaa'eefii jiras jedhu.
Mootummaan raayyaa waraanaa of harkaa qabu kan paartii biyya bulchu qofa tajaajilu osoo hin taane kan uummataa fi biyyaaf dhaabbate godhee haaromsuu dhabuu Obbo Mikaa'el akka rakkootti kaasu.
"Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa har'as akkuma durii bakka nageenya buusuuf deemetti akkaataa barbaadamuun uummata keenya tiksaa hin jiru" jedhu.
"Inumaa qaama Oromoo waraanurra goree uummata keenyarraan miidhaa geesisaa jira" jedhu.
Kanaaf ammoo wal dhabdee daangaa Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz gidduu turee fi kan Mooyyalee agarsiistuudha jedhan.
Ministirri Muummee Dr Abiy Ahimed "haaromsa guddaan bara kana hojjenne kan humna waraanaa irratti hojjennedha" jedhanii ture.
Obbo Mikaa'el garuu kun qabatamaan waan lafarratti mul'atuun addadha jedhu.
Gama biraan waliigaltichi hojiitti osoo hin hiikamiin akka harkifatu kan gumaache sababi biraa jiraachus himu.
"Otuma waliin hojjennuu loltoota keenya irratti waraana bobbaasuun bakkeewwan tokko tokkotti walitti bu'insi uumamuufi ajjeechaan uummata keenya irraa har'as dhaabbachuu dhabuun nu mufachiiseera" jedhu.
"Rakkina nu hin ilaallanne WBO ykn qeerrootu uume jechuun maqaa keenya balleessuun gama aanga'oota mootummaan mul'ataa jira" jedhan Obbo Mikaa'el Booran.
Waa'ee pireezidaantii duraanii Girmaa Waldagiyoorgis kana beektuu?
Waajjirri isaanii Gullallee jiru guutummaatti akka hin gadhiifamneefi sababoota quubsaa hin taaneen akka lafarra harkifataa jiru, dhaabbanni Oromoota qabsoo keessatti miidhamaniifi baqatanii biyyaa bahan gargaaru ORA jedhamu akka biyyatti galee hojii isaa itti fufuuf hayyama dhabuus akka rakkoo dabalataatti kaasu.
"Aangoof jecha wal dhiibuufi maqaa wal balleessuu irra waliin taanee haala waliin dubbataa turreen yoo hojjenne nuyi yeroo kamiyyuu [waliigalticha hojiitti hiikuuf] qophiidha" jedhu.
Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessa loltooti ABO akka socho'an kan himan Obbo Mikaa'el, waraana kan hogganu dhaaba akka ta'eefi ajaja dhaabaa malee waraanni socho'u akka hin jirre himaniiru.
Waraanni hidhatee biyyattii keessa socho'u hundi garuu kan ABO'ti jechuun hin danda'amu jedhu.
Mootummaa Itoophiyaa: "Hiidhannoo hiikkachuun dhimma mariif dhiyaatu miti"
10 Onkololeessa 2018
Tarkaanfiin boqonnaa xumuraa lola Tigraay eegaluu MM Abiy labsan
Tarkiin namoota bara 2016 Erdogan fonqolchuuf yaalan umrii guutuun adabde
Lola Tigraayitti adeemaa jiru, Eertiraan harka keessaa qabdii?
Lola Tigraay irratti Ertiraan yaada kennite
19 Sadaasa 2020
Manni Murtii dhimma dhorkaa qabeenyaa Obbo Jawaarfaa irratti ibsa gaafate
Sudaan fi Jibuutiin 'Mootummaa Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan beeksisan'
20 Sadaasa 2020
Nageenyaafi tarkaanfii Lixaafi K. Oromiyaa irratti waan odeeffanne
21 Sadaasa 2020
Bulchiinsi yeroo Tigraay qondaaltota haaraa akka muudu beeksise
Viidiyoo, Daa'imman gabaa gurraachatti gurguraman, Turtii 11,24
16 Sadaasa 2020
‘Abbaa kootti biyyoo uffisuu hin dandeenye’ - Jiraataa G. Koonsoo
Akkamiin waraanni Itoophiyaafi TPLF buufata xiyyaaraarratti walitti bu'an
Dargaggoo viidiyoo saalqunnamtii dubartootaa gurguru waggaa 40 itti muran
Mallattoo ergaa osoo hin argin maaliif bilbila keenya tuttuqna?
Gabaasa dhugummaa suuraalee lola Tigraayin walqabatan mirkaneessu
Tigraayitti 'yakki waraanaa' akka hin raawwanne UN akeekkachiise